Indlu yaseGeorgia ethandekayo yelitye elinqabileyo - I-Airbnb
Indlu yaseGeorgia ethandekayo yelitye elinqabileyo
Le ndlu inomtsalane yaseGeorgia igcwele igcwele iimpawu zomlinganiswa kwaye idityaniswe nazo zonke izixhobo zale mihla ezithe zahlaziywa ngothando zaba kumgangatho ophezulu. Iindwendwe zinokufikelela ngokupheleleyo kuyo yonke ipropathi ekumgama nje omfutshane ukuya kumbindi wedolophu yentengiso yaseBury St Edmunds.
Indlwana yam ithokomele kakhulu ngesitovu somthi, ikhitshi esanda kufakwa kunye negumbi lokuhlambela kunye negumbi lokulala elipholileyo elineendonga eziveziweyo zezitena kulo lonke. Lilitye elinqabileyo lendawo yokuzimela ebekwe kumganyana nje wokugibisela kumbindi wedolophu.
4.87 · Izimvo eziyi-126
IBury St Edmunds inentaphane yeekhefi, iindawo zokutyela, iindawo ezivulekileyo kunye nezitiya ze-abbey ezilondolozwe kakuhle ukuze zonke iindwendwe zijonge kwaye zizonwabele. Idolophu isaqhuba kakuhle ngeemarike zangoLwesithathu nezangoMgqibelo apho zonke imveliso entsha yasekhaya inokuthengwa khona. IGreene King Brewery isasebenza ngokupheleleyo kanye embindini wedolophu kwaye ixhasa ii-pubs ezingama-50 kunye neendawo zokutyela kunye nehlabathi elidumileyo laseIndiya Pale Ales.
Njengombuki zindwendwe, ndihlala kufutshane nekona kwaye ndiyafumaneka ukunceda iindwendwe ngexesha lokuhlala kwazo ukuba ziyafuna. Ukuba ufuna ukuhlalisana ndicela undazise, kodwa ukuba ufuna ukonwabela ipropathi uwedwa ndiza kukushiya kuyo ngokonwaba.
Njengombuki zindwendwe, ndihlala kufutshane nekona kwaye ndiyafumaneka ukunceda iindwendwe ngexesha lokuhlala kwazo ukuba ziyafuna. Ukuba ufuna ukuhlalisana ndicela undazise, kodwa…